Robotrading na boky fampianarana Trading - Blockchain News
Robotrading dia ny dingan'ny fampiasana andian-torolalana ho an'ny mametraka veloma mba hividy na hivarotra mizara, vola, na cryptocurrency. Ny fampianarana napetraka dia mifototra amin'ny tsena isan-karazany tondro, anisan'izany ny vidiny, fotoana, boky, ary ny hafa. Rehefa mpivarotra dia mahazo reraka ary tsy manam-potoana hanakalo tanana, dia mieritreritra ny hifindra ny robotrading. Fa ny tokonam-baravarana ny hiditra amin'io faritra io dia tena avo, indrindra ho an'ny olona izay tsy misy ara-bola na ara-teknika manokana ny fanabeazana.
About ny tetezamita mba robotrading sy ny fotoana malalaka
Raha ny mpampiasa vola tsy miankina dia mifantoka amin'ny tombontsoa, mahafantatra ny maha samy hafa ny boky fampianarana sy ny automated varotra, ary manana fahaiza-manao fandaharana sasany, izy ireo, fara fahakeliny, tokony hieritreritra momba ny mandeha ho azy ara lalamby. Ny fahombiazana sy ny votoatiny ny asa dia mitombo: fotsiny ny olona hanao bebe kokoa. By ara-barotra ho azy dia afaka handrakotra kokoa ny fifanakalozana, mampiasa bebe kokoa ny fitaovana sy ny paikady. Saingy tsy midika izany fa tsy tokony hanara-maso toy ny boky fampianarana asa mandeha ho azy ireo. Aza manadino momba ny fanaraha-maso, Tsy azo atao mihitsy ny zava-dehibe foana ianareo ho mailo.
Any varotra, na boky fampianarana na algorithmic, dia mitaky ezaka sy mavitrika tanteraka tao amin ny dingana. Raha te-hahazo, tsy maintsy mandany fotoana be dia be ny varotra. Ny tena tsara, dia tokony hanana miasa manontolo andro, rehefa tsy afaka manoratra fehezan-dalàna fotsiny, ka mandehana miala sasatra. Mazava ho azy, dia tsy ho ampiarahina fotsiny amin'ny toerana iray, ianao dia ho afaka ny handeha manerana izao tontolo izao fa raha foana ianao amin'ny aterineto. Fa tena tsy momba ny ambany ny fandriana mihantona ambanin'ny hazo rofia iray nandritra ny andro maro.
About Fiat vola sy ny cryptocurrency
In fandaharana iombonana, tsy misy hafa, na inona ianao varotra, Fiat vola na cryptocurrency. Ny zava-dehibe indrindra dia ny hanangana rafitra ara-barotra mpanamboatra tsara. Misy algorithms izay afaka ampiasaina tsara na amin'ny mahazatra vola, cryptocurrencies, na ny tahiry mizara. Tsy zava-dehibe inona no fitaovana izay ampiharina ho an'ny teny. Inona no olana dia na tsia ny fitsipika ao amin'ny algorithm Te hilaza milaza fitondran-tena ny fitaovana voafantina manokana. Koa eto dia ny fanontaniana ny hevitra voalohany ara-barotra sy ny tetika rijan. Na izany na tsy izany, raha misy algorithm dia mivoatra, ny fitondran-tena ny iray manokana-pananana ara-barotra dia kaontiana.
About soa, loza sy ny adala fahadisoana
Ny lehibe indrindra manararaotra mandeha ho azy ny boky fampianarana varotra ara-barotra dia tsy ny fihetseham-po. Matetika ny olona no mandray fanapahan-kevitra miorina amin'ny fihetseham-po sy ny fihetseham-po ary tsy foana ny manana fiantraikany tsara eo amin'ny vokatra, indrindra amin'ny fotoana fanakianana. Mifanohitra, ny algorithm manao ny asany fotsiny tsy misy fihetseham-po na ny fientanentanana; tsy mandray fanapahan-kevitra sy ny mpivarotra taitaitra tamin'ny hentitra mazava tetika. Ary raha ny algorithm dia nanomboka, ny mpivarotra tsy afaka tsehatra sy hanova zavatra.
Mazava ho azy, misy loza, ary matetika izy ireo tsena loza. Ny hevitra ara-barotra algorithm mety intsony fitadiavam-bola amin'ny fotoana iray, rehefa misy zava-mitranga sy ny krizy ampoizina mihitsy mitranga eny an-tsena. Ny ankamaroan'ny milina tsy afaka mamantatra ny tsato-kazo famantarana. Tsy maintsy manara-maso izany toe-javatra, ary hanova ny milina ara-potoana na mankarary azy. Misy ihany koa ny mety kely fa ny fifanakalozana dia handao anao.
Ary, rindrambaiko afaka manao adaladala indraindray fa fahadisoana lehibe. Ny algorithm tsotra manana ny vola ary ny vola. Mazava ho azy, mba ho fidiram-bola, ny tokony ho vidiny ambony kokoa noho ny vola lany. Raha afangaro azy, ny milina dia ho mahasoa. Matetika newbies miatrika izany olana. Vokatr'izany, tena tsotra fahadisoana na oviana na dingana mitarika ho amin'ny fatiantoka goavana.
Izay mety ho fahaiza-manao manokana dia tena ilaina. Ny hoe tsy fahaiza-manao manokana, midika voalohany indrindra ny fahalalana tsara ny matematika sy lojika. Fa bebe kokoa momba mazava lojika sy ny fahatakarana ny fomba ofisialy hanoratra fitsipika ara-barotra, fa tsy momba ny matematika satria tsy mila fiovana algebraic amin'ny dingana voalohany. Misy mazava manavaka ny fihetseham-po ny fomba varotra sy ny fahafahana ara-barotra momba ny lojika ao ofisialy napetraka ny zava-nitranga sy ny zavatra. Amin'izao dingana, dia mila fahalalana matematika. koa, fandaharana fahaiza-manao sy ny didy ny fandaharana fototra fiteny (ohatra, “ny C”) Tena ilaina.
About ny fandrika
Indraindray dia toa tonga amin'ny mahasoa ny tetika, mahatalanjona sy ny asa varotra hevitra. Mandanja azy ianao Na izany na tsy matematika modeling fandaharana, ohatra, Mathcad. dia, ianao no mijery ny antontan-kevitra, akora mamorona modely, ary manao kajikajy takina. Aorian'izay, no ahitana ny komisiona sy ny surcharges, ary izay rehetra miasa tsara. Fa momba izay ihany, tsy mety, tsy zanak'osy ny tenanao, Anisan'izany ny fandoavam-bola, izany zava-dehibe. Nefa avy eo ianao tonga saina fa ny fametrahana ny ara-teknika ny hevitra mila vola bebe kokoa noho ianao dia afaka mahazo avy amin'izany hevitra.
Indray andro hono, iray mpampiasa vola tsy miankina nanao asa lehibe milina ara-barotra, atao hoe Panda. Ary niteraka ny 8,000% hiverina nandritra ny telo volana voalohany amin'ny saika tsy mety. Panda no noresahina ary hyped be dia be, fa tena niasa tsara. Fa ny zavatra dia hoe ny milina nanao ity vola avy amin'ny voalohany in-drenivohitra 1 arivo, raha ny isam-bolana ho fanohanana ny foto-drafitrasa ara-teknika rehetra ilaina mba hanohanana ny tetikasa vidin'ny manodidina ny 10 arivo. Noho izany, fa tamin'ny voalohany dia tsy mahasoa tetikasa, satria na dia tsy afaka manarona ny vola ho an'ny herinaratra, mahery lohamilina sy ny ordinatera kajy fanatanterahana ny tetikasa indrindra, tokony hahatsiaro fa ny milina tsy foana ny vola avo, fa ny vola ho an'ny fikarakarana tsy maintsy aloa hatrany. Noho izany, dia zava-dehibe ny kajy tsy ny fomba hahazoana, fa koa tena tsy maintsy mandany mba hahazoana.
About mafy vola
Dia mazava fa milina azo voaendrika fomba hafa, izany dia miankina amin'ny boky ny varotra, inona leverages sy ny fampindramam-bola dia ampiasaina rehefa varotra, Na vola vola amin'ny olona iray manokana na hanamarina, sns. Misy be dia be ny tsipirian'ilay. Fa amin'ny ankapobeny, dia afaka mahazo tsikelikely saika isan-taona miaraka amin'ny tsy misy loza mety hitranga tamin'ny fandrantoana nandritra ny folo taona ao amin'ny 10% isan-taona, na dia mety miezaka ny varotra taona iray amin'ny 100%.
Kanefa ny lalàna eo amin'ny tsenam-bola fa tsy ho afaka hamitaka - ny ambony ny mety hiverina, ny lehibe kokoa ny mety mety. Tena ho matanjaka tahaka ny fitsipi-tolotra sy ny tinady. Noho izany, raha matoky be vola, ho vonona ho fatiantoka lehibe. Ity fitsipika ity dia tsy azo ialana ary tokony ho raisina anaty kajikajy rehefa miverina eo amin'ny fampiasam-bola (ROI) na ara-barotra algorithmic profitability.
Momba ny sehatra ho an'ny newbies
Misy sehatra izay hisy ny varotra tsy misy fahaiza-manao amin'ny Trading. Ohatra, Libertex no tena malaza sehatra, fa misy maro hafa. Izany dia safidy tsara ho Newbie hanandrana ka hahita ny fomba asa rehetra.
Kranj, ny Slovenianina d ...
Previous Post:Blockchain News 24 Janoary 2018
Next Post:Fandoavam-bola tsy mety mpandraharaha mivatra Bitcoin